Margarekha पौडेल पक्षको भेलामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग – Margarekha
पौडेल पक्षको भेलामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग
Nepali Congress leaders Ram Chandra Poudel (left) and Shashanka Koirala.
काठमाडौ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले अनपेक्षित हार बेहोरेपछि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष युवा नेताहरू नेतृत्वप्रति खनिएका छन् । उनीहरूले नेताहरू पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहितका पदाधिकारी, संसदीय बोर्डका सदस्य र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
दोस्रो तहका नेता नवीन्द्रराज जोशीको अगुवाइमा शुक्रबार भएको भेलामा दीपक गिरी, कमला पन्त, रामकृष्ण यादव, गुरु घिमिरे, गोविन्द भट्टराई, बद्री पाण्डे, कल्याण गुरुङ, जीवन परियार, किरण यादव, रत्ना शेरचन, धनराज गुरुङ, सरिता प्रसाईं, हृदयराम थानीलगायतले नेताहरूलाई गुनासो सुनाए।
पार्टीले संघीयताअनुसार पार्टीको संरचना नबनाएको, भ्रातृ संस्थालाई निर्वाचनमा प्रभावकारी परिचालन नगरेको, गुटका आधारमा टिकट वितरण गरेको जस्ता कमजोरीले पार्टीले पराजय बेहोरेको भन्दै गम्भीर समीक्षा गर्न छिटो केन्द्रीय समिति, महासमिति र आवश्यक पर्दा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने मागसमेत १४ नेताले गरेका छन्।
कसले के भने ? हाम्रो पक्षको अडान भएन : नवीन्द्रराज जोशी
उम्मेदवार चयनमा संसदीय बोर्डले न्यायपूर्ण निर्णय गरेन। सभापतिको गुटले एकलौटी गर्‍यो। बोर्डमा बसेका हाम्रो पक्षका नेताहरूले अडान लिनुपथ्र्यो । तर, भूमिका प्रभावकारी भएन । केन्द्रीय समितिमा रहेका हाम्रो पक्षका ६ नेताले टिकट पाएनन्। सभापति पक्षका सुरेन्द्र पाण्डेबाहेकका सबैले पाए, तर यसमा हाम्रो पक्षको नेतृत्वले किन प्रभावकारी अडान लिन सकेन ?
कांग्रेसकै नेतृत्वमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । परिवर्तन र समृद्धिको यात्रामा देशलाई अघि बढाउन हामीले नै धेरै काम गरेका छौँ, तर हामीले गरेका कामलाई नै भजाउन सकेनौँ । पार्टी पारदर्शी हिसाबमा नचल्दा कमजोर हुँदै गएको छ, अब यसरी चल्दैन। नयाँ पत्रिकाबाट
२२ पुष २०७४, शनिबार ०९:१५ प्रकाशित